SHOCK ABSORBERS Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha SHOCK ABSORBERS Factory
Jumlada Jumlada Midig ee Caloosha Hawada Naxdinta Nuugista-Z11050
Twin Tube Shock Absorber Naqshadeynta tuubada mataanaha ah waxay leedahay tuubbo gudaha ah oo loo yaqaan tuubada cadaadiska iyo tuubada dibedda ee loo yaqaan tuubada keydka ah. Tuubada kore waa keyd saliid. Markay ushu kor iyo hoos u socoto, dheecaanka ayaa lagu riixayaa / lagu jiidayaa waalka salka iyo soo gelida / dibedda, tuubada keydka ah. Kala-baxa ku jira bistoolada wuxuu shaqeeyaa oo keliya inta saliidda lagu quusinaayo. Dhibaatooyinka Tangrui waxaa lagu farsameeyay saliid ku filan oo ay ku buuxiyaan tuubada keydka, iyadoon loo eegin safarka naxdinta leh ama booska. Tuubbada cadaadiska marwalba way buuxsan tahay ...
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ee Cerato-Z11051
Darawallada maalinlaha ah iyo waddo-marista culusba si isku mid ah, kuwa wax ka qaata naxdinta ayaa Jeep-kaaga si habsami leh u socda oo ka ilaaliya ganaaxa. Haddii aad u baahan tahay beddelaad, kor u qaadis ama dib-u-habeyn buuxda, Tangrui waxay ku siisaa waxyaabo badan oo naxdin leh oo ku habboon sannad kasta iyo nooca Jeep ee suuqa. Kaliya halka ugu fiican ee lagu iibiyo Halkaan oo kale, waxaad ogtahay in injineernimada tayada leh lagu tirinayo safarka ugu fiican, anaguna sidoo kale waan qabannaa. Beddelaadayada qaybta naxdinta leh waxay ka yimaadaan soo saarayaasha ugu sareeya Pro Comp Hakinta iyo Rubicon Express t ...
Tayada Sare Gawaarida bidix ee Dayactirka Gawaarida Gawaarida Gawaarida-Z11054
Naxdinta 'Shock Absorber' waxay dejisaa dhaqdhaqaaqa gu'ga oo saameynaya. Guga ayaa sii wada qandaraaskiisa oo balaaranaya markii xoog la adeegsado. Waa lagama maarmaan in la xaddido dhaqdhaqaaqa guga raaxada safarka rakaabka. Shooga Absorber wuxuu nidaamiyaa dhaqdhaqaaqa guga iyadoo loo marayo iska caabinta laga sameeyay iyadoo saliida la marsiinayo dalool yar oo waalka ah. Nidaamka Multi Disc Valve System Damping force contol waxaa soo saaray xawaaraha, xaddiga, iyo wixii la mid ah ee saliida maraya va ...
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Damper Shoogga-Z11057
Nidaamka Hakinta Cabsida Shoogga Neefta Oem- Z11063
MAXAY SAMEEYAAN ABSORBERS? Nalalka shoogga ayaa ah qeybaha amniga ee muhiimka ah ee saameyn ku yeelan kara duugista taayirka, xasilloonida, istaagida, gariirka, raaxada darawalka, iyo nolosha isteerinka iyo qaybaha kale ee ganaaxyada. Hawlaha Muhiimka ah ee Naxdinta Sameeya Xakamaynta dhaqdhaqaaqa guga naxdinta waxay la shaqeeyaan nidaamka ganaaxa gawaarida ganacsiga si loo ilaaliyo xiriirka taayirada ilaa wadada iyadoo la xakameynayo dhaqdhaqaaqa guga. Wuxuu ilaaliyaa ilaha iyo bacaha hawada Shoogyadu waxay ku shaqeeyaan ilaha gawaarida ganacsiga - haddii mid daciifo, ...
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida-Z11064
Oem Shock Nuugista Autoparts Wixii LEXUS-Z11066
TangRui Guga Shooga Neefsashada-Z11068
Neefsashada Neefta Hore ee Hawada Cerato-Z11052
Tayada Sare Gawaarida Dayactirka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida-Z11053
Naxdinta Rubber Rubber, Naxdinta Nuugista Bolt, Jabinta Steering Front, Gawaarida Hub, Hood Shooga Nuugista, Wadajirka Kubadda Tire,